Isigaba sokuphepha okhuvetheni ezweni siphazamise izinhlelo zosomankomane - Bayede News
USiza Ngiba nozakwabo bezamankomane
Amazwe abelindelekile aseginqikile sekubhekwe asele ku-Euro 2020
Ukwanda kwezibalo zabantu balapha eNingizimu Afrika abahaqwe igciwane ukhuvethe, kudale ukuthi uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa abeke izwe esigabeni sesi-4.
Lokho kusho ukuthi luningi uguquko oluzokwenzeka, njengoba ziningi izinto ezimisiwe nje.
ElaboHlanga belinengxoxo ekhethekile nosomankomane omncane uSiza Ngiba, ukhale kakhulu ukuthi izwe selibuyele esigabeni sesi-4 okusho ukuhlehla komqhudelwano abesewuhlelele isikhathi eside.
Umqhudelwano abebheke kuwona uNgiba oweNational Championship, lo mqhudelwano bekulindeke ukuthi ube mhla zili-13 kuya mhla zili-17 kuNtulikazi nonyaka eKapa. Okuvelayo ukuthi manje lo mqhudelwano usuhlehlele uMandulo kuya kuMfumfu. Lo mqhudelwano awumncane neze njengoba abanqobile bazifaka ohlwini lalabo abazokhethwa ukuthi bamele iNingizimu Afrika emqhudelwaneni wamaCommonwealth Games azokuba ngonyaka ozayo.
“Ukuhlehla kwalo mqhudelwano kungiphazamise kakhulu. Umqondo wami wonke ubusugxile kuwona, njengoba ubususeduza nje. Isikhathi sokuzilolonga engisitholile besanele kakhulu ekutheni ngenze kahle eKapa. Kodwa ngeke ngakhala kakhulu ngizoqhubeka nokuzikhandla kukhona konke kuze kufike usuku lawo lo mqhudelwano” kusho uNgiba.
Lo somankomane odabuka eClermont uneminyaka yobudala engama-20, isisindo alwa njengamanje esingama-52 kg. Ngaphandle kokuba ngusomankomane, ungumfundi wase-Durban University of Technology (DUT) nalapho enza khona izifundo zeFashion and Textile Design.
USekwaze ukuthi amele isifundazwe kathathu kumqhudelwano iNational Championship, uke wamele iNingizimu Afrika kumqhudelwano i-African Union Sport Region U/20 owabe useBotswana ngonyaka wezi-2019 nalapho abuya khona nendondo yesiliva. Wathola indondo yeGolide kumqhudelwano iNelson Mandela owawuse-East London.
“Ngiyafuna nakanjani ukubuya nendondo yegolide kumqhudelwano iNational Championship, bese ngiyakwazi ukuya kumaCommonwealth Games okuyilona phupho lami elikhulu. Nakhona ngibuye nendondo yegolide” usho kanje.
UNgiba wenza ezibukwayo nje kungenxa kayise ophinde abe ngumqeqeshi wakhe uSfiso Ngiba. “Ngabe ngenza iphutha elikhulu uma ngingawabongi amagalelo omqeqeshi wami ongubaba wami. Indlela angiqeqesha ngayo iyona eyenza ukuthi ngibe nokuzithemba okukhulu noma ingabe ngibhekene nasiphi isitha” kuchaza uNgiba (Siza). Uthe ngeke awushiya ngaphandle umndeni wakhe wonke lapho abala khona unina kanye nabafowabo. Uthe lo mdlalo uyazifela ngawo kakhulu yize unganakiwe, uyafisa ukuthi nawo uvezwe kwithelevishini nanoma kuthiwa kudlalwa imiqhudelwano emincane kangakanani.
Usomankomane abukela kuyena u-Errol Spence Jr wase-United State of America (USA) noZolani Tete wakuleli, okwenza athande bona indlela abashesha ngayo eringini. “Nginezifiso ezinkulu kakhulu empilweni yami. Ngiyafisa ukuphakamisa ifulegi lalapha eNingizimu Afrika ngelinye ilanga ngokuthi ngiphathe elinye lamabhande amakhulu kulawa amane ahlonishwayo emhlabeni” usho kanje uNgiba.
Uma ekhuluma ngamabhande amane amakhulu ubala ele-World Boxing Association (WBA), World Boxing Council (WBC), International Boxing Federation (IBF) nele-World Boxing Organisation (WBO).
Selilonke iqembu elizomela isifundazwe iKwaZulu-Natal kuma-Elite lime kanje:
Esisindweni sama-46 kg uSiphesihle Makhoba
Esisindweni sama-49 kg uNhlakanipho Kunene
Esisindweni sama-49 kg uThamsanqa Ngcobo
Esisindweni sama-52 kg uSiza Ngiba
Esisindweni sama-56 kg uNtethelelo Magcaba
Esisindweni sama-60 kg uMxolisi Zuma
Esisindweni sama-64 kg uMenzi Hlongwa
Esisindweni sama-69 kg uSizwe Ntanzi
Esisindweni sama-75 kg uSamkelo Mdletshe
Esisindweni sama-81 kg u-Asenathi Hlabisa
Esisindweni sama-81 kg uNkosinathi Dlamini
Esisindweni sama-91 kg uNkosiyethu Mzileni
Esisindweni sama-91 kg uLindokuhle Mabaso
Esisindweni sama-91+ kg uCarel Quinn
Esisindweni sama-48 kg u-Aneliswa Madlala
Esisindweni sama-51 kg uThandolwethu Mathiba
Esisindweni sama-54 kg uLethokuhle Sibisi
Esisindweni sama-57 kg uPhiwokuhle Mnguni
Esisindweni sama-60 kg uPhilile Ndelu
Esisindweni sama-64 kg uNombulelo Radebe
Esisindweni sama-69 kg u-Anele Ndlovu
Esisindweni sama-81 kg uNomzamo Mkhwanazi
Esisindweni sama-91 kg uHlengiwe Myeni
nguSabelo Maphumulo Jul 2, 2021